५०० वर्षअघि नै गणतन्त्रवादी हलेसीका किरात – Tesro Ankha
किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिमको ‘मुदुम सङ्कलन अभियान’ को पहिलो चरणअन्तर्गत दसैं–तिहार (२०६८) का बीचमा आफ्नै गाउँघरमा एक महिना बिताउनु मेरा लागि निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । इतिहासका यथार्थ हाम्रा दैनिक जीवनसँग कसरी यात्रारत रहेछन्, मसिनोसँग थाहा भयो । यस्तो लाग्यो– किरातहरूसम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यहरू अझै पनि गाउँघरमा असुरक्षित अवस्थामा ‘सुरक्षित’ रहेछन् । यस्ता थुप्रै तथ्यहरूमध्ये म यहाँ होलेसुङ र हलेसीसम्बन्धी नयाँ ऐतिहासिक तथ्यबारे थोरै चर्चा गर्दै छु ।
होलेसुङ र दस भाइ सन्तान
गाउँका थुप्रै बूढापाका र मुख्यतः हलेसी महादेवस्थान गाविसका हिकेम्मा बाजे (जितराज राई) ले बताएअनुसार हलेसी क्षेत्रमा फैलिएका चाम्लिङ राईहरूको पहिलो पुर्खा मझुवागढीबाट आएका होमैखुङ थिए । उनका छोरा होलेसुङले सेनवंशी शासनअन्तर्गत हलेसी थुममा स्वायत्त शासन गरेका थिए । उनै होलेसुङका दस भाइमध्ये नौ भाइका सन्तान अहिले हलेसी क्षेत्रमा नौ पाछाका रूपमा फैलिएका छन् । ती होलेसुङले मझुवागढीकै लाफेछाकी बजु बिहे गरेका थिए । तर, बजु माग्न जाँदा माइतीले दिएनछन् । नदिएपछि होलेसुङ बाजे आफैं गएर सोधनी गरेछन्, ‘मलाई किन तपाईंहरूकी छोरीचेली नदिनुभएको ?’ माइतीहरूले भनेछन्, ‘हाम्री छोरी दोजिया छिन् । जानीजानीकन हामी कसरी दिऊँ ?’ होलेसुङले भनेछन्, ‘त्यो पेटको बच्चा हाम्रै हो ।’ यसो भनेपछि चाहिँ ‘ल तिम्रै हो भने लैजाऊ न त’ भनेछन् । तर, बाटामा ल्याउँदाल्याउँदै बजुले छोरा जन्माउनुभएछ । पेट बोकेकी दुलही बजुको पेटको बच्चालाई ‘होँमो’ (राजाको) भन्ने अर्थमा जेठो छोराको नाम होम्दिम् होँछा राखिएछ । त्यहींबाट एउटा पाछा बन्यो होम्दिम्छा ।
पहिल्यै पेट बोकेका कारण माइतीपट्टिका बाजेबजुलाई छोरीको घरजम हुँदैन भन्ने लागेको रहेछ । तर, छोरीले दोस्रो सन्तान पनि छोरै जन्माएपछि छोरीज्वाइँको माया बस्यो भन्ने अर्थमा माइलाको नाम मायाराजा होँछा राखिदिएछन् । (त्यतिखेर माइतीपट्टिका बाजेबजुले नै नाम राखिदिने चलन थियो क्यार ।) माइलाका सन्तानहरू मायाराजाछा भए । त्यही मायाराजाछाबाट मानसुङ्छा र मानसुङ्छाबाट मुङ्सिम्छा बनेको छ । अहिले मायाराजाछा कोही पनि छैनन् । एवम्क्रमले तेस्रो सन्तान जन्मियो । माइती बाजेबजुले ‘ल अब छोरीले जित्यो’ भनेर उनको नाम जिताराजा होँछा राखिदिएछन् । चौथो सन्तान जन्मिएपछि मझुवागढीका बाजेबजुले ‘ल पूरापूर जन्माए है’ भनेर उनको नाम पुरिम होँछा राखिदिएछन् । उनका सन्तानहरू अहिले पुरिम्छाका रूपमा चिनिन्छन् । पाँचौं सन्तान जन्मदाचाहिँ ‘ल वीरैवीर जन्मिए’ भनेर विराजा होँछा नाम राखिदिएछन् । विराजाका सन्तानहरू अहिले बिराछाका रूपमा चिनिन्छन् । छैटौं सन्तान जन्मिएपछि माइती बाजेबजुले ‘उम्फ्लों–उम्फ्लों’ (एकसेएक) सन्तानहरू जन्मिए है भनेर फ्लोमो होँछा नाम राखिदिएछन् । उनका सन्तानहरू अहिले फ्लोमोछाका रूपमा चिनिन्छन् ।
सातौं सन्तान जन्मनुपूर्व हो वा जन्मेपछि नाम राखिदिनुपूर्व नै हो कुन्नि, सेन र मकवानका बीचमा चलेको युद्धमा सेनको तर्फबाट होलेसुङ लड्न हिँडेछन् । उनी दुई वर्षमा पनि नफर्किएपछि पक्कै युद्धमा मर्यो भन्ठानेर सातौं सन्तान बाबुटोकुवा मुल्याहा रहेछ भनेर मावली बाजेबजुले मुङ्लो होँछा नाम राखिदिएछन् । उनका सन्तान अहिले मुङ्लोछाका रूपमा चिनिन्छन् । होलेसुङ मरेको अनुमान गरिएपछि बजुको नोकरसँग लसपस बढेछ । तर, होलेसुङ फर्किए । आफ्नी श्रीमती र नोकरबीचको लसपसबारे थाहा पाएपछि होलेसुङले उनलाई काट्न तम्सिएछन् । (त्यतिखेर ‘नाक–चुल्ठो गर्ने’ चलन रहेछ अर्थात् परपुरुषसँग लसपस गर्ने आइमाईको नाक, चुल्ठो काटिदिने अथवा ज्यानै मार्ने चलन रहेछ ।) बजुले लोग्ने होलेसुङलाई भनेछन्, ‘मलाई किन मार्छौ ? नमार । यत्रो बालबच्चा हुर्काउनु छ । कसले हुर्काउँछ ? बरु म चोख्याउनी भदैनी ल्याइदिन्छु ।’ होलेसुङले स्वीकार गर्दै भनेछन्, ‘ल त्यसो भए म तँलाई मार्दिनँ तर भोलि घामको झुल्कोमा भदैनी ल्याइदे ।’ बजु मझुवागढी पुगेर ‘यस्तोयस्तो समस्या आइलाग्यो, भदैनी दिनुप¥यो’ भनेपछि उताबाट पनि भदैनी दिएछन् । होलेसुङले भदैनीसँग बिहे गरे । तर, युद्धबाट सुनकोसी–दूधकोसी (?) हुँदै फर्कनेक्रममा उनको मझिनीसँग लसपस भएको रहेछ । बाबु–माइतीले पेट बोकेकी ती मझिनी पनि होलेसुङलाई जिम्मा लगाउन ल्याएछन् । र, उनीबाट जन्मिएको सन्तानको नाम ‘नाम्लामा तिरा’ (घामबाट जन्मियो) भन्ने अर्थमा आठौं सन्तानलाई नाम्ला होँछा राखिएछ । उनका सन्तानहरू अहिले नाम्राछाका रूपमा चिनिन्छन् ।
उता भदैनीबाट पनि छोरा जन्मिएछ । भदैनीले पनि ‘सैंद्यु’ (बिँडो थाम्यो) है भनेर नवौं सन्तानको नाम सैंदा होँछा राखिदिएछन् । उनका सन्तानहरू आजकल सैंदाछाका रूपमा चिनिन्छन् । भदैनीबाट अर्कै सन्तान जन्मिएपछि ‘ल पातेका है पातेका’ (ल जन्माए है जन्माए) भनेर दसौं सन्तानको नाम पातेसुङ होँछा राखिएछ । उनका सन्तानहरू अहिले पातेसुङ्छाका रूपमा चिनिन्छन् । हलेसी क्षेत्रमा अहिले मूलतः होलेसुङका यिनै सन्तानहरू फैलिएका छन् । अन्य चाम्लिङ राईहरू पनि बसोबास गर्छन् तर उनीहरूको अनुपात सानो छ ।
होलेसुङ र कविलातन्त्र (गणतन्त्र)
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने होलेसुङका दस भाइ छोराहरू भए पनि हलेसी भेगमा अहिले नौ भाइका सन्तानहरू मात्र छन् । साइँला जिताराजा होंछाका सन्तानहरू हलेसी क्षेत्रमा भेटिँदैनन् । त्यसको ऐतिहासिक कारण छ । होलेसुङको निधनपछि उनका साइँला छोरा जिताराजा होँछा मुखिया चुनिएका थिए । उनीपछि उनका छोरा (?) मकमल हलेसी थुमका मुखिया चुनिए । त्यसपछि मकमलका छोरा (?) भ्वाँराम मुखिया चुनिए । हो, उनै मकमलको शासनकालमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारक्रममा हलेसी थुममा आक्रमण गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य आक्रमणमा पराजित भएपछि भ्वाँराम अर्थात् जिताराजाका शाखासन्तान कोही मारिए, बाँचेकाहरू पनि भागे । जसले गर्दा अहिले जिताराजाका सन्तानहरू हलेसी क्षेत्रमा भेटिँदैन ।
भ्वाँरामको दरबारको भग्नावशेष अहिले पनि दुर्छिम गाविसको कोटडाँडामा असुरक्षित अवस्थामा छ । त्यहाँ लगभग दुई/तीन सय मिटरको फरकमा ओल्लो र पल्लोडाँडामा दुईवटा दरबार रहेको छ– एउटामा भ्वाँराम बस्थे, अर्कोमा उनका मन्त्री । भ्वाँराम बस्ने दरबारवरिपरि चारैतिर सुरक्षाका लागि सुरुङ बनाइएको छ । तर, बेलैमा सुरक्षा, संरक्षण र उत्खनन गर्न नसके यो ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुने निश्चित छ । अहिले जुन तीव्रतासाथ सडक विस्तार र बजारीकरण हुँदै छ, त्यसले यो खतरा अझ बढेको छ ।
तर होलेसुङको दरबार भने कोटडाँडामा होइन, तल गैह्रामा पर्ने खिम्लेमा थियो । त्यसबखत हलेसी क्षेत्रवरपर अरू पनि स्थानीय किरात कविला शासकहरू थिए । हलेसी थुमको पश्चिममा च्यास्मी थुम थियो । यी दुई थुमका बीचमा लडाइँ भइरहन्थ्यो । यस्तै लडाइँमा च्यास्मी थुमका किरात मुखियाले होलेसुङलाई वाण हानी हत्या गरेका थिए । यसको बदला लिन होलेसुङका छोराहरूले प्रत्यक्ष लडाइँ होइन षड्यन्त्र रचेछन् । उनीहरूले च्यास्मी थुमका किरात मुखियालाई भनेछन्, ‘मार्न त तिम्ले हाम्रो बुवालाई मार्यौ तर जे भयो भइसक्यो, अब हामी तिम्लाई नै हलेसी थुमको पनि मुखिया मान्छौं, आएर शासन गर ।’ उनीहरूको विश्वासमा परेर च्यास्मी थुमका मुखिया होलेसुङको दरबारमा आए । होलेसुङका छोराहरूले उनको राम्रैसँग स्वागत–सत्कार गरे । तर, बिदाइ गर्ने निहुँमा उनको हत्या गर्ने योजना बनाए । अहिले दुर्छिम गाविसमा पर्ने छापडाँडामा उनीहरूले त्यस्तो थलो चयन गरे । छापडाँडाको खसिनी भञ्ज्याङमा पुगेपछि भञ्ज्याङको दायाँ–बायाँ दुवैतिर मान्छेको पुत्ला बनाएर राखे । धनुकाँड चलाउने मान्छे दुवैतिर लुकिबसे । च्यास्मी थुमका मुखिया अचम्मित हुँदै जतापट्टिको पुत्ला हेर्नेछन्, त्यतैबाट वाण छोड्ने योजनाअनुसार खसिनी भञ्ज्याङमा पुगेपछि पुत्ला देखेर अचम्ममा परेका उनलाई वाण हानेर हत्या गरियो । छिमेकीसँगको झगडाका कारण खिम्ले गैह्रामा दरबार राख्नु रणनीतिक हिसाबले असुरक्षित हुने नै भयो । त्यसैले, खिम्ले छाडेर कोटडाँडामा ढुंगाको गाह्रोबाट दरबार बनाइयो ।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ– जेठा, माइला छोराहरू हुँदाहुँदै कसरी साइँला जिताराजा मुखिया (शासक) भए त ? होलेसुङको मृत्यु हुँदा चार दाजुभाइ मात्र हुर्किएका थिए । सबैले आफू मुखिया हुन पाउनुपर्छ भनेर दाबी गरेछन् । कुरा नमिलेपछि उनीहरूले सात दिन लाप्पा खेल्दा जो जित्छ उही मुखिया चुनिन्छ भनेर समझदारी बनाए । चार दाजुभाइ कोटडाँडानजिकै रहेको टारमा सात दिन लाप्पा खेलेछन् । (त्यो टार अहिले पनि उस्तै छ ।) लाप्पामा साइँला जिताराजाले जितेका कारण उनी मुखिया भए । भनेपछि किरातहरूमा लिच्छवि, मल्ल, शाह राजाहरूमा जस्तो राजाको जेठा छोरा नै राजा हुने निरङ्कुश राजतन्त्र होइन, मुखिया निर्वाचन गर्ने गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो । चार÷पाँच सय वर्षअघि त किरातहरू गणतान्त्रिक थिए भने दुई हजार वर्षभन्दा अघि नेपाल खाल्डो (जसलाई अहिले काठमाडौं भनिन्छ) मा किरातहरूले निरङ्कुश राजतन्त्र चलाउने कुरै भएन, उनीहरू निर्वाचनद्वारा मुखिया चुन्ने गणतान्त्रिक व्यवस्थामै थिए । त्यसैको निरन्तरतामा होलेसुङका साइँला छोरा मुखिया चुनिएका हुन् । वास्तवमा किरातहरू सर्वप्राचीन गणतन्त्रवादीहरू हुन् । हामीले एउटा जबरजस्त भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ कि नेपाल खाल्डोमा शासन गर्ने किरातहरू राजाको जेठा छोरा स्वतः राजा हुने निरङ्कुश राजतन्त्रमा थिएनन्, जनताबाट अनुमोदित/निर्वाचित हुनुपर्ने गणतान्त्रिक कविलातन्त्रमा थिए ।
होलेसुङ हलेसी क्षेत्रका प्रथम किराती कविला शासक थिए (?) उनको दरबार हालको दुर्छिम गाविसको वडा नम्बर तीनमा पर्ने हात्तीढुङ्गे गाउँको ‘खिम्ले’ भन्ने जग्गामा थियो भनेर अहिले पनि बूढापाकाहरू भनिरहेका छन् । दरबार थियो भनिएको ठाउँमा अहिले खेतिपाती गरिने भएकाले प्रस्ट सङ्केतहरू त पाइँदैन तर त्यस ठाउँमा नपाइने चिल्ला ढुङ्गाहरू बारीमा गारो लगाइएको अवस्थामा छन् । खिम्लेनजिकै हात्तीढुंगेका खगेन्द्र राईका अनुसार अहिले पनि खनजोत गर्दा त्यहाँ ढुङ्गा भेटिन्छ । त्यसबाहेक खिम्लेमा पछिसम्म पनि चार सुरमा ठाडो गाडिएको चारवटा ढुङ्गा थियो रे । ‘यो होलेसुङ राजाको ढुङ्गा हो है नाति’ भनेर डिगेम्मा बजुले खगेन्द्र राईलाई बारम्बार बताउनुभएको थियो रे ।
यसैगरी, घनश्याम राईका अनुसार पनि आजभन्दा बीस÷तीस वर्षअघिसम्म त्यो ढुङ्गा थियो । उहाँहरू गोठाला जाँदा ‘कामी–राजा’ खेल तिनै अग्ला ढुङ्गाहरूलाई समातेर खेल्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले ती ढुङ्गाहरू भेटिँदैनन् । केही ढुंगा पहिरोले लगेको छ भने केही खेत बिराउन गारो लगाउन प्रयोग गरिएको हुन सक्छ । राम्ररी उत्खनन गर्ने हो भने त्यो ढुङ्गालगायत होलेसुङको दरबारसम्बन्धी तथ्यहरू फेला पर्न सक्छ ।
होलेसुङबाट हलेसी नामकरण
हलेसी नाम होलेसुङसँग जोडिएको छ । होलेसुङले शासन गरेको थलो र उनको दरबार रहेकाले होलेसुङ शब्द अपभ्रंश हुँदै खिम्लेवरपरका गाउँलाई हलेसी भनिएको रहेछ । पछि होलेसुङले शासन गरेको समग्र क्षेत्रलाई बुझाउन हलेसी थुम भनियो । तर, अहिले जुन प्राकृतिक गुफालाई ‘हलेसी’ का रूपमा चिनिन्छ, त्यो ठाउँको नाम सुरुमा हलेसी थिएन । त्यसको नाम पाटी, मठ र मादेउथान थियो । धेरै पछि मात्र त्यससँग हलेसी जोडेर हलेसी महादेवस्थान भन्न थालिएको हो । पुरानो हलेसीचाहिँ विस्मृत हुन पुगेको छ । यसलाई व्युँताउन सकेमात्र किरातहरूले राजनीतिक शक्तिको अभ्यास गरेको हलेसीको गौरवशाली इतिहास सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय बूढापाकाहरूसँगको कुराकानीबाट के थाहा भयो भने अहिलेको दुर्छिम गाविसतिर आउँदै गरेका गिरी (महादेवस्थानका पुजारी) सँग बाटोमा भेट भयो र ‘कता हिँडेको’ भनेर सोध्यो भने ‘हलेसी हिँडेको’ भन्थे । र, अहिलेको दुर्छिम गाविसतिरकाहरू उता गुफातिर जाँदा पाटी हिँडेको, मठ हिँडेको अथवा मादेउथान हिँडेको भन्थे रे । काठमाडौंमा उपचार गर्न आउनुभएको जङ्गबहादुर राईसँग पनि २०६८ सालमै मैले ‘कुरा त यस्तो हो रे नि काका’ भनेर कुरा उप्काउँदा यही कुरा पुष्टि हुनेगरी उहाँले भन्नुभएको थियो, “म सुरुमा ससुराली जाँदा एकजना नयाँ मान्छे मेरो ससुराली घरमा आयो । उसले मलाई औंल्याउँदै मेरी सासूसँग सोध्यो, ‘उहाँ को हुनुहुन्छ ?’ सासूले भन्नुभयो, ‘ए उहाँ त हलेसे डाँडाको मेरो ज्वाइँ ।’ जङ्गबहादुर राईको ससुराली गाउँ अहिलेको ‘महादेवस्थान’ छेउको कात्तिके हो भने घर हालको दुर्छिम गाविसको तीन नम्बर वडा अर्थात् खिम्लेदेखि अलिकति माथि पर्ने भञ्ज्याङ हो । यसरी पुरानो हलेसी भनेर हालको दुर्छिमको वडा नम्बर १, ३ र ४ को ठाडो डाँडा ओरालोका गाउँहरूलाई चिनिन्थ्यो । किनभने त्यो नै होलेसुङको शासनको केन्द्र थियो ।
अझसम्म पनि घरघरमा सुरक्षित रहेका तमसुक, रसिदलगायतका कागजपत्रहरूले यसको पुष्टि गर्दोरहेछ । मैले आफ्नै घरमा रहेका कागजपत्रहरू हेर्दा त्यसमा ‘थुम हलेसी र हलेसी थुम’ लेखेको पाएँ । त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा पहिलेका तालुकदार तम्बरसिंह राई र पुराना लेखापढीकर्ता सर्वधन राईले के बताउनुभयो भने ‘हलेसी थुम’ अन्तर्गत हालका च्यास्मी, महादेवथान, धितुङ, अर्खौले, सल्ले, मङ्गलटारलगायतका गाविसहरू पर्थे । यी गाउँहरू हलेसी थुमअन्तरगतका गाउँ हुन् भन्ने बुझाउन सरकारी कागजातहरूमा ‘हलेसी महादेवथान’, ‘हलेसी च्यास्मी’, ‘हलेसी अर्खौले’ आदि लेखिन्थ्यो । तर, ‘हलेसी दुर्छिम’ भनेर नामचाहिँ लेखिँदैनथ्यो । किनभने हलेसी शब्द अहिलेको दुर्छिम गाविसका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । कालान्तरमा हलेसी नाम महादेवथानसँग मात्र जोडिन पुग्यो र बन्यो हलेसी महादेवस्थान गाविस ।
यसरी ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भन्दा हलेसीको नाम होलेसुङबाट रहन गएको हो र होलेसुुुङको दरबार क्षेत्रवरपरको गाउँलाई हलेसी भनिन्थ्यो । तर, अहिले नयाँ र पुरानो दुवै हलेसीलाई उनीहरूको स्वत्वसहित चिनाउनु ऐतहासिक दायित्व हुन आएको छ । किनभने, ‘नयाँ हलेसी’ ले जुन पहिचान बनाएको छ अर्थात् जुन धार्मिक–सांस्कृतिक केन्द्रको पहिचान बनाएको छ, त्यो किरात स्वायत्त राज्यको सामाजिक–आर्थिक हिसाबले ‘नयाँ सम्भावना’ पनि हो । यसलाई भत्काउनु बुद्धिमानी हुने छैन । त्यस्तैगरी ‘पुरानो हलेसी’ ले पनि किरातहरूको ‘इतिहासको एउटा कालखण्ड र राजनीतिक शक्तिको अभ्यास’ को प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, त्यसलाई बेवास्ता गर्नु आफैंलाई बेवास्ता गर्नुसरह हुनेछ । त्यसकारण, पुरानो हलेसीलाई पनि व्युँताउनैपर्छ ।
होलेसुङ, सेनवंश र नागा जाति
माथि उल्लेख भइसकेको छ– सेन र मकवानबीचको युद्धमा सेनको तर्फबाट सहभागी भएका होलेसुङ लामो समयपछि (दुई÷तीन वर्षपछि) मात्र घर फर्किएका थिए । त्यसो भए सेन र मकवानबीच कहिले युद्ध भएको थियो त ? ज्ञानमणि नेपाल (नेपालनिरुपण, २०५५, पृष्ठ २८९–२९१, प्रकाशक : नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान) का अनुसार पश्चिम कर्णाली प्रदेशका सिञ्जाली खस मल्ल राज्यहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएपछि सोह्रौं शताब्दीको अन्तिम चरणमा पाल्पाका मुकुन्द सेनको उदय भयो । उनले पूर्वी नेपालका सम्पूर्ण भू–भाग कज्याएका थिए । तर छोरा, नाति र पनातिको पालासम्म आइपुग्दा यो राज्य विजयपुर (पल्लोकिरात), चौदण्डी (माझकिरात) र मकवानपुर (वल्लोकिरातको चुरेभित्रको दून र महाभारतको कोसीसम्म) मा विभाजित हुन पुगेको थियो ।
बूढापाकाहरूले भन्ने गरेको ‘सेन र मकवानबीचको युद्ध’ चौदण्डीका रूपमा विभाजित हुनुपूर्वको विजयपुरका शासक हरिहर सेन तथा उनका जेठा छोरा छत्रपति सेन एकापट्टि र अर्कोपट्टि हरिहर सेनकै कान्छा छोरा अर्थात् मकवानपुर राज्यका शासक शुभ सेनबीचको युद्ध थियो । उनीहरूबीच पहिलो युद्ध विजयपुरले मकवानपुरमाथि आक्रमण गरेपछि विक्रम संवत् १७२८ मा भएको थियो तर काठमाडौंका तत्कालीन मल्ल राजाहरूको सहयोगमा शुभ सेनले युद्ध जिते । उनीहरूबीच लगत्तै अर्को वर्ष पनि सिन्धुलीमा युद्ध भयो, जसमा पनि पाटनका मल्ल राजाको सहयोगमा शुभ सेनले नै जिते । यी दुवै युद्धमा सहभागी हुनुपरेकै कारण होलेसुङ ढिला घर फर्किए । यो घटना आजभन्दा ३४१–४२ वर्षअघिको हो । र, त्यसबखत होलेसुङको उमेर ५० वर्ष थियो भनेर मान्ने हो भने हलेसी भेगमा हालका चाम्लिङ राईहरू लगभग ४०० सय वर्षअघि बसोबास गर्न सुरु गरेका थिए । यसमा थप दिक्तेलको मझुवाबाट आए भनिएको होलेसुङका पिता होमैखुङको उमेर पनि ५० वर्ष नै मान्ने हो भने हलेसी भेगमा चाम्लिङ राईहरू ४५० वर्षअघि आइपुगेका थिए ।
तर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– होलेसुङले कसमाथि शासन गरे त ? अर्थात्, होलेसुङका पिता होमैखुङ हलेसी भेगमा आइपुग्नुभन्दा अघि त्यस क्षेत्रमा कसको आवादी थियो ? यसको पनि सम्भावित उत्तर फेलापरेको छ । अहिले दुर्छिम गाविसकै रातमाटेमा एक घर र राबुमा दुई घर गरी जम्माजम्मी तीन घर राईहरू छन्, जो आफूलाई होलेसुङका सन्तान मान्दैनन् । आफूलाई साक्रुमिछा भन्ने उनीहरू आफ्नो उत्पत्तिथलो होलेसुङको दरबार रहेको ठाउँ खिम्लेलाई मान्छन् । उनीहरूको ‘सामै’ ले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । उनीहरूको सामै रहेको छ– छुङ्रुमी वाताम्पुई खिम्लेटो बोखापुइ । ‘खिम्लेटो बोखापुइ’ को अर्थ हुन्छ खिम्लेमा पैदा भएको । त्यस हिसाबले हेर्दा हलेसीमा पहिलो आवादी साक्रुमिछाहरूको थियो र होलेसुङले उनीहरूलाई विस्थापन गरेर शासन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साक्रुमिछाहरूलाई यदाकदा नागाको सन्तान पनि भनिन्छ । नागाल्यान्डमा बत्तीस वर्ष बसेर आउनुभएको दुर्छिम गाविसको वडा नम्बर ३ (भञ्ज्याङ गाउँ) कै पदमकुमारी राईका अनुसार एकथरि नागाहरूले ‘आफूहरू नेपालबाट आएको किराती (राई) हौं’ भन्छन् रे । हलेसी क्षेत्रमा पनि प्रशस्त पाइने ठाडो गरी बनाइएका चिहानहरूमा भेटिएका पुल्लिक मालाहरू जो लिम्बूहरूले खरिद गरेर लैजाने गरेका छन्, ती तिनै धनी नागाहरूले लगाउने गरेका छन् रे । त्यसबाहेक पदमकुमारी राईसँगकै कुराकानीमा चाम्लिङ र नागाहरूको भाषामा पनि केही समानता रहेको पाइयो । नागाहरूको चिहानमा पाइने पुल्लिक मालाहरूका आधारमा भन्दा यो जाति प्राविधिक ज्ञानको हिसाबले निकै उन्नत थियो । स्थानीय भनाइअनुसार उनीहरू ठूलो खडेरीका कारण बसाइँ सरेका थिए । बसाइँ जाने नागाहरू ‘निरले–दाम्दले’ थिए भन्ने भनाइ अहिले पनि हलेसी क्षेत्रमा सुन्न पाइन्छ । त्यस्तो उत्पात मच्चाउने खडेरी कहिले आएको थियो होला, यसै भन्न सकिन्न । तर, बसाइँ नगएका नागाहरू साक्रुमिछा हुन् कि भनेर अनुमानसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ । ‘हलेसी’ मा नागाहरूले छाडेको इतिहासको छाप विभिन्न रूपमा भेट्न सकिन्छ ।
मुदुमी आधारमा भन्दा हलेसी क्षेत्र (तुवाचुङ–जायजुमडाँडा) किराती सभ्यताको आदिथलो हो भने हलेसी गुफा किराती सभ्यताका आदिपुर्खाहरू तयामा, खियामा, रैछाकुले (हेत्छाकुप्पा/खोक्चिलिपा) को निवासस्थान । त्यस्तै, हलेसी किरातीहरूको राजनीतिक सत्ता र शक्तिको अभ्यासको थलो पनि हो । एक वाक्यमा भन्दा हलेसी किराती सभ्यताको आदिथलो, पुर्खाको निवासस्थल र सत्ता–शक्ति अभ्यासको राजनीतिक थलो हो ।
हलेसी विकास समिति
हलेसी गुफालाई अहिले किरात, हिन्दु र बौद्धमार्गी सबैले आ–आफ्नो सांस्कृतिक थलो मान्छन् । केही सय वर्षअघि किरातहरूले पत्ता लगाएपछि हलेसी गुफामा किरातहरूले पूजाआजा गर्थे । यसो भन्ने बूढापाकाहरू हलेसी क्षेत्रमा अझै छन् । तर, सरकारले हिन्दुहरूको मात्र स्वामित्व झल्कनेगरी ‘हलेसी महादेवस्थान विकास समिति’ गठन गरेको छ । यसलाई सबै धर्मावलम्बीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुने संरचना र नाम पनि ‘हलेसी विकास समिति’ बनाउनु अति जरुरी छ । अबको संघीय नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सांस्कृतिक प्रभुत्वको अन्त्य हुनैपर्छ ।
तुवाचुङ : किरात उद्गमभूमि कि सभ्यता उत्पत्ति थलो ?
तुवाचुङ जायजुमको संरक्षणका लागि २०६५ सालमा गठन भएको संस्था हो ‘किरात उद्गम आदिभूमि तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समिति’ । यसले पाँच/सात वर्षयता लगातार काम गरिरहेको छ तर छलफल गर्नैपर्ने कुराचाहिँ संस्थाको नाम स्वयं नै बन्न पुगेको छ । तुवाचुङ जायजुम किरात उद्गम आदिभूमि हो कि किरात सभ्यताको उत्पत्तिथलो हो ? मुदुमले तुवाचुङ जायजुमलाई किरात सभ्यता (कपडा बुन्ने, विवाह प्रणाली, साकेला, कृषि आदि) को उत्पत्तिथलो मानेको छ, किरातहरू नै उद्गम भएको थलो मानेको छैन । त्यसैले तुवाचुङ जायजुमलाई ‘किरात उद्गम आदिमभूमि’ होइन ‘किरात सभ्यता उद्गम आदिम भूमि’ भन्नु सही हुन्छ ।
२०७४ असार १० ०१:०७